Ikhaya > Isevisi
Sinomugqa wokukhiqiza ophelele kanye nemishini yokuhlola, kufaka phakathi umugqa wokukhiqiza othomathikhi,
Sinethimba lethu elethu ukwenza ucwaningo, ukuklama, ukukhiqiza nokudayisa.
Siphumelele i-IS0 9001:2005. ejwayelekile, uzinzile, uthembekile
Imikhiqizo yethu iqhathaniswa kahle nabanye abathengisi.
Siyinkampani ehlanganiswe no-R&D, ukukhiqizwa nokuthengisa ngokuphelele,
Ngekhwalithi enhle kakhulu, isevisi yezinga lokuqala, ibhizinisi elithembekile
Ngemva kokuxoxisana nekhasimende, silungiselela ukwethula iphrojekthi entsha.
I-1, Uma ikhasimende linomdwebo, ohlanganisa ubukhulu, izinto zokwakha, izidingo ezikhethekile, khona-ke singenza isikhunta ngokusho komdwebo.
2, Uma ikhasimende lingenawo umdwebo, kodwa libe nesampula, khona-ke isampula idinga ukuthunyelwa kunjiniyela wethu, khona-ke sizokala ubukhulu, futhi senze umdwebo. Bese senza isikhunta ngokusho komdwebo.
Kwesinye isikhathi, ikhasimende lizokwenza isikhunta sesampula, esincane futhi esibiza kancane, Ukwenza amasampula nje. Kwesinye isikhathi, ikhasimende lenza isikhunta esikhulu ngqo, kukho kokubili ukwenza amasampula nokukhiqiza ngobuningi.
Ngemuva kokwenza isikhunta, sizohlola isikhunta, uma isikhunta silungile. Bese wenza amasampula, unjiniyela wethu uzokala amasayizi amasampula futhi ahlole ubulukhuni nokunye, ukuze aqiniseke ukuthi amasampula ayikhwalithi enhle. Bese sithumela amasampula kumakhasimende ethu ukuze ahlolwe.
Ngemuva kokuqinisekiswa kwamasampula, sizoqala ukukhiqiza ngobuningi. Ukugeleza kokukhiqiza kanjena:
Ukuhlolwa Kwento Engahluziwe→Nikeza→Ukuxuba Impahla→Impahla→Ukusika→Ikhambi Lokuqala→Ukuhlola Okungashayi →Ukuhlola Okuvamile→Ukusebenza KweBurr→100%Ukuhlola Amehlo→IPQC→Ukugeza noma Ukugaya→Ukwelapha Iposi→FQC→Ukupakisha
Ngemva kokukhiqizwa ngobuningi kanye ne-FQC, khona-ke sizopakisha imikhiqizo yekhwalithi .Yebo, uma udinga iphakheji eyenziwe ngokwezifiso, singakwazi futhi ukuyenza, kodwa sidinga imali eyengeziwe.
Bese sizothumela izimpahla zethu, inani elincane, ngokuvamile ngezokuthutha ezihamba phambili , njenge-FedEx , DHL, TNT, UPS, noma ngendiza. Uma isamba esikhulu, ngokuvamile ngomkhumbi noma ezokuthutha zomhlaba.
Wonke umkhiqizo unempilo yawo yeshelufu, uma kunezinkinga zekhwalithi phakathi nesikhathi seshelufu, sicela usithinte, sihlala sikhona ukuze sikusize. Asenzi ibhizinisi elilodwa nje, kodwa ukufuna ukubambisana kwesikhathi eside, ukufeza isimo sokuwina-win.
Singakwazi ukukhokha nge-paypal, Western Union, Money Gram, T/T, L/C; Isikhathi sokuhola isampula sisezinsukwini eziyi-7-10, isikhathi sokuhola somthamo weMisa yizinsuku ezingama-25-30; Singakunikeza ukwesekwa kobuchwepheshe obuchwepheshile. Futhi imikhiqizo yethu izinga gurantee izinyanga 12.
Sitshala imali eningi ukuze sisungule eyethu ilabhorethri ukuze siqinisekise ukuthi singakwazi ukuqhamuka nezixazululo zamakhasimende ngokushesha nangempumelelo.
INQUBO YOKUQHUBEKA KOMKHIQIZO :
Okubalulekile→Ukugaya Ibhola→Ukucindezela Okubalulekile →Ukucwenga Kokuqala→Ukucwenga Okwesibili→Isitsha sobumba→Ukubumba Isandla →Ukubumba Okuzenzakalelayo →Ukomisa →Ukomisa →Ukufaka I-Sintering→Imikhiqizo Eqediwe→Ukupakisha Ikhathoni→Ukupakisha Ikesi Lokhuni
● Amasampula Amahhala
Azikho izidingo ezikhethekile.Ungakhathazeki, ngemboni yangokwezifiso, sizoqoqa inani elikhulu lemisebenzi yekhwalithi ephezulu njengamasampula amahhala ereferensi yamakhasimende.
● INKONZO ye-OEM/ODM
Sinikeze isevisi ye-oem/odm iminyaka engaphezu kwengu-13 , futhi singenza umkhiqizo ngemidwebo yamakhasimende, futhi singakwazi ukupakisha ngokwezifiso ikhasimende.
Sikhetha izinto zokwakha ngokuya ngezidingo zokusetshenziswa komkhiqizo wakho.
Sinikeza amakhotheshini phakathi kwamahora angu-24 futhi sihlela ukuthunyelwa phakathi kwezinsuku ezingu-20-30.
Isungulwe ngonyaka wezi-2009, i-Liling xing tai long special ceramic co., Ltd ebambe iqhaza endaweni yoMkhiqizi, Umthengisi kanye Nomthengisi Wokukhiqiza umlilo we-assay crucible, i-cupel, umkhiqizo we-alumina ceramic ohlanzekile, umkhiqizo we-silicon carbide ceramic, umkhiqizo we-graphite ceramic. inqubo yabo yokuthuthukiswa, siyaqinisekisa ukuthi izinto eziphezulu kuphela ezisetshenziswa ochwepheshe bethu kanye namathuluzi nemishini yesimanjemanje. Ngaphandle kwalokhu, sihlola lezi ngezizathu ezahlukahlukene ngaphambi kokuthi sizithumele endaweni yamakhasimende ethu.